किन हुन्छ स्मरणशक्ति कमजोर ? – Janaubhar
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन ९, २०७४ | 454 Views ||
के तपाईं ढोका बन्द गरे पनि पटक–पटक जाँच गर्नुहुन्छ ? या कुनै काम गरेर पनि केही समयपछि पत्तो पाउनुहुन्न । कहिलेकाहीँ यस्तो हुनु सामान्य हुन सक्छ । तर, पटक–पटक यस्ता क्रियाकलाप दोहोरियो भनेचाहिँ राम्रैसँग सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
मस्तिष्क अर्थात् दिमाग निकै ठूलो उपहार हो । स्मरण दिमागसँग जोडिएको हुन्छ । स्मरणशक्ति कमजोर हुनु वा बिर्सनुको मुख्य कारण एकाग्रताको कमी हो । नियमित यस्तो समस्या देखिएमा मस्तिष्कको रिकल प्रोसेसका लागि आवश्यक पोषण तत्वको कमीले पनि हुन सक्छ ।
स्मरण शक्ति बढाउन
स्मरण शक्तिलाई तीव्र बनाउन पातदार तरकारीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । भिटामिन बी–१ र बी–१२ युक्त खाद्य पदार्थको नियमित प्रयोग गर्नुस् । त्यस्तै, खानामा नियमित घ्यूको प्रयोगले पनि स्मरण शक्ति बढाउने काम गर्छ । प्रत्येक दिन एक गिलास दूध, बदाम, एबोकाडो, माछाको प्रयोगले पनि स्मरणशक्ति मजबुत बनाउन भूमिका खेल्छ ।
स्मरणशक्ति बढाउन योग पनि महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ । योगले मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने गर्छ । नियमित व्यायाम गर्दा पनि मस्तिष्कको रक्तरसञ्चारमा वृद्धि हुन्छ र स्मरणशक्ति बढ्दै जान्छ ।
पूरै निद्रा सुत्नुस् । पूरै निद्रा सुत्दा पूरै दिनको घटना दिमागमा सहजै बस्न मद्दत पुग्छ । तनावबाट टाढा रहनुस् । मनोरञ्जन गर्नुस् । साथी र परिवारसँग समय बिताउनुस् वा त्यस्तो काम गर्नुस् जुन कामले तपाईंलाई खुसी मिल्छ ।
स्वस्थ भोजनको कमी
भारी मात्रामा खाना खानुलाई मानसिक स्वास्थ्यका लागि त्यति राम्रो मानिदैन । यसका अतिरिक्त मसलेदार र तेलयुक्त खानाले पनि स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउँछ । मस्तिष्कलाई असर पु¥याउने अर्को बानी भनेको अत्यधिक सेवन हो । यसले पनि स्मरणशक्तिलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्छ ।
मासु र प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थको प्रयोगले मस्तिष्कको क्रियाकलापमा हानी पु¥याउने काम गर्छ । भिटामिन बी–१ र बी–१२ को कमीका कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुन्छ ।
स्मरणशक्ति कमजोर हुनेबारे सबैलाई थाहा भएको कारण हो, बढ्दो उमेर । मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा पनि स्मरणशक्तिमा ह्रास आउने गर्छ । तर, यो जरुरी छैन कि उमेर बढ्यो भन्दैमा स्मरणशक्ति कमजोर भइहालोस् । यति मात्र हो, उमेर बढ्दै जाँदा मस्तिष्क कोषिका निर्माणको प्रोसेस प्रभावित हुन्छ । मस्तिष्क कोषिकाले नै स्मरणशक्ति बढाउने हो ।
औषधीको बढी प्रयोग
अल्जाइमरजस्ता रोगले पनि स्मरण शक्तिमा हानी पु¥याउने काम गर्छ । यस्ता रोगले मस्तिष्कको कोषिकालाई नोक्सान पु¥याउने काम गर्छन् । त्यस्तै, थाइराइडको हर्मोनले पनि स्मरण शक्तिमा असर पारेको हुन्छ । यसका साथै निकै बढी ओभर द काउन्टरजस्ता औषधीको सेवनले स्मरण शक्तिमा थप असर पार्छ ।
ड्रग्सको अत्यधिक सेवन पनि तपाईंको स्मरण शक्ति कमजोर बन्ने कारण हुन सक्छ । ड्रग्सले मस्तिष्कको कैयौँ भागमा सीधा प्रभाव पार्ने गर्छ । तम्बाकु, चुरोटजस्ता पदार्थको सेवन स्मरणशक्ति कमजोर हुने अर्को कारण हो । यस्ता पदार्थको सेवनले मस्तिष्कको कोषिकामा कम अक्सिजन पुग्छ । परिणाम स्मरणशक्ति कमजोर बन्दै जान्छ ।
थुप्रै अध्ययनले देखाएको छ कि निद्राको कमीले मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर बन्छ । कम निद्राले मस्तिष्कको याद गर्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्ने गर्छ । जब हामी सुत्छौँ, त्यतिबेला दिनभरका क्षण दिमागमा सजिलै स्टोर हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिलाई पर्याप्त निद्रा पर्दैन भने यसको असर स्मरणमा पर्न जान्छ ।
तनाव र दुःखीपनाले पनि स्मरणशक्ति कमजोर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । तनावले मस्तिष्कको स्टोरेज प्रक्रियामा समेत असर पु¥याउने गर्छ ।
टाउकोमा गहिरो चोटका कारण मानिसको अकस्मात् स्मरण कमजोर हुन सक्छ । कतिपय दर्दनाक दुर्घटनापछि मानिस ठीक हुँदासमेत पहिलेका घटना राम्रोसँग स्मरण गर्न अक्षम हुन्छन् । मेमोरीको थेरापी गरेपछि मात्र यस्तो समस्या समाधान भएको थुप्रै उदाहरण छन् ।
स्मरणशक्ति बढाउने ७ सजिला तरिका
१. विषयलाई जोड्नुहोस् : तपाईं जुन चिज सिकिरहनुभएको छ, त्यसलाई पुरानो कुरासँग जोड्न सिक्नुहोस् । यसले तपाईंलाई दुवै कुराका बारेमा आवश्यक कुराहरु सम्झन सजिलो हुनेछ ।
२. दोहो¥याउनुहोस् : यदि कुनै चिजलाई मनमनै दोहो¥याउनुहुन्छ भने त्यसलाई सम्झन सजिलो हुनेछ । अथवा, कुनै पनि कुरालाई कागजमा निरन्तर लेखेर पनि स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट लेखिएका शब्द स्मरण गर्न सजिलो हुनेछ ।
३. नौलो तरिका अपनाउनुहोस् : यदि तपाईं कुनै घटनाक्रमलाई याद गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने कुनै नौलो तरिका अपनाउनुहोस् । उदाहरणका लागि तपाईं नौवटा ग्रहको नाम सम्झने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने ‘माइ भेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लानेट’ को तरिका अपनाउन सक्नुहुनेछ । यसमा हरेक शब्दको पहिलो अक्षरबाट ग्रहको नाम आउछ । अथवा, सूत्रबद्ध रुपमा पनि शब्द सम्झन सक्नुहुनेछ ।
४. कार्डमा लेख्नुहोस् : जब महत्वपूर्ण बार, गते, सूत्र आदि सम्झने प्रयास गर्नुहुन्छ भने यसका लागि फ्लायस कार्डमा लेख्नुहोस् । जब तपाईंलाई आवश्यक पर्नेछ, त्यो कार्ड हेर्न सक्नुहुनेछ ।
५. गाउनुहोस् र स्मरणशक्ति बढाउनुहोस् : आफ्नो लयबद्धताका कारण संगीत सजिलै तपाईंको दिमागमा बस्छ । आफ्नो मनपर्ने गीतको धुनमा त्यस चिजलाई सेट गर्नुहोस्, जसलाई तपाईं सम्झन चाहनुहुन्छ । यसबाट तपाईंले कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म याद गर्न सक्नुहुनेछ ।
६. पढेको कुरालाई महसुस गर्नुहोस् : पढेको कुरालाई मस्तिष्कमा एक तस्बिर बनाउने प्रयास गर्नुहोेस्, यसबाट तपाईं चिजलाई लामो समयसम्म याद राख्न सक्नुहुनेछ । पढिरहेको बेलामा तपाईं ती शब्दका बारेमा सोच्न सुरु गर्नुहोस् । कल्पना गर्नुहोस्, त्यो चिज कस्तो देखिनेछ, त्यसको सुगन्ध, आकार प्रकार कस्तो हुनेछ, स्वाद कस्तो हुनेछ आदि ।
७. उदाहरण दिनुहोस् : जब तपाईं कुनै पनि चिजलाई असल जिन्दगीसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ भने, त्यो मष्तिष्कमा एक किसिमको छाप बनेर बस्छ र सम्झन सजिलो हुन्छ ।
के पनि भनिन्छ भने मानिसले आफ्नो मष्तिष्क आफ्नो जीवनकालमा मुस्किलले ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न सक्छ, बाँकी भाग प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले ती बाँकी भाग पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
Prevतीन वर्षभित्र खरको छानामुक्त उपमहानगर
Nextपरिवेश मात्र बदलिएको हो, भूमिका एउटै हो- पूर्ण घर्ती, सभामुख प्रदेश ५